Mmiri ọṅụṅụ na-egbu egbu na Hawaii: Ndị ọbịa na Oahu nwere ike izu ike!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Mmiri ọṅụṅụ na-egbu egbu na Hawaii: Ndị ọbịa na Oahu nwere ike izu ike!
Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Mmiri ọṅụṅụ na Waikiki, Koolina, North Shore, ma ọ bụ Kailua, ebe ndị ọbịa ga-anọ na Oahu bụ otu n'ime mmiri mgbata kacha dị ọcha ma dị mma ị nwere ike ịhụ ebe ọ bụla na United States.
Otú ọ dị, dị ka Hawaii Rep. Kai Kahele, e nwere nsogbu nke mbara igwe n'ike-n'ike na Honolulu County. Kahele na-ekwu maka mwepu mmanụ ọkụ na nchekwa mmanụ ụgbọ mmiri nke Red Hill na Island nke Oahu.
Ndị nnọchi anya nzuko nke Hawaii wepụtara nkwupụta nkwonkwo n'izu gara aga na-agba ndị agha mmiri ume ka ha na ndị obodo na-akparịta ụka nke ọma banyere ihe omume na ugbo mmanụ ọkụ Red Hill wee zaghachi ngwa ngwa na akụkọ banyere isi mmanụ na mmiri mgbata nke usoro mmiri ya na-ejere Joint Base Pearl Harbor-Hickam. .
US Sens. Brian Schatz na Mazie Hirono na US Reps. Ed Case na Kai Kahele kwuru na nkwupụta mgbasa ozi na ha zutere na nso nso a na odeakwụkwọ ndị agha mmiri Carlos Del Toro iji kparịta ọrụ mmanụ ụgbọala na Hawaii. Del Toro ga-anọ na Hawaii na Disemba 7 iji nyochaa okwu a ozugbo.
Ndị agha mmiri US kwuru na ha na-enyocha mgbawa n'ebe nchekwa mmanụ ụgbọala Red Hill ka ewepụtara ngwakọta mmiri na mmanụ n'ọnụ mmiri. Nke a bụbu okwu na 2014.
Ngwunye 2014 ewepụtabeghị azịza ndị na-eju afọ, hapụ naanị azịza, afọ asaa ka e mesịrị.
Dị ka akụkọ na-adịbeghị anya na mgbasa ozi mpaghara Hawaii si kwuo, ndị agha mmiri kpacharaghị anya kọwaara ndị ọchịchị Hawaii na ọha na eze okwu ahụ.
Ebe nchekwa nchekwa mmanụ ọkụ Red Hill bụ ebe nchekwa mmanụ ụgbọala na Island nke Oahu, Hawaii. Ndị agha mmiri United States na-arụ ọrụ, Red Hill na-akwado ọrụ ndị agha US na Pacific. N'adịghị ka ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ na United States, Red Hill nwere ike ịchekwa ihe ruru galọn mmanụ 250.
Ọ nwere tankị nchekwa ala dị nchara 20 nke etinyere n'ime kọmpụta ma wuo ya n'ọgba ndị e gwuru n'ime Red Hill. Tankị nke ọ bụla nwere ikike nchekwa ihe ruru nde galọn 12.5.
Ejikọtara tankị Red Hill na pipeline atọ na-enye ike ndọda na-agba ọsọ kilomita 2.5 n'ime ọwara iji na-eme mkpọtụ na Pearl Harbor. Nke ọ bụla n'ime tankị 20 dị na Red Hill ruru 100 ụkwụ na dayameta yana 250 ụkwụ n'ịdị elu.
Red Hill dị n'okpuru ugwu ugwu mgbawa na nso Honolulu. Ndị American Society of Civil Engineers kpọpụtara ya dị ka ala injinia obodo na 1995.
Tupu United States abanye n'Agha Ụwa nke Abụọ, nchịkwa Roosevelt nwere nchegbu maka adịghị ike nke ọtụtụ tankị nchekwa mmanụ dị n'elu ala na Pearl Harbor. N'afọ 1940, o kpebiri iwu ụlọ ọhụrụ nke dị n'okpuru ala nke ga-echekwa mmanụ ọkụ karị ma nwee nchebe pụọ na mwakpo ikuku nke ndị iro.
Achọtala mmanụ ala n'ime mmiri sitere na ụlọ ọrụ ọgwụgwọ ndị agha mmiri na-achịkwa na Honolulu, Ngalaba Ahụike Hawaii. Nke a mara ọkwa Wednesday.
Ndị ọrụ ahụike kwuru na nnwale na Red Hill Elementary School gosipụtara nsonaazụ dị mma maka mmanụ ala na mmiri ọñụñụ. E zigara ihe nlele na California maka nyocha ọzọ.
Dabere na akụkọ sitere na Civil Beat nke mbụ bipụtara, ihe nlele emere na abalị Sọnde, ndị ọrụ chọpụtara ọnụọgụ nke "hydrocarbons na-agbanwe agbanwe" nke jikọtara ya na mmanụ ụgbọ elu JP-5 ma ọ bụ mmanụ dizel, Converse kwuru. Nnwale nke abụọ emechara na Tọzdee hụrụ "ihe ngosi doro anya nke ngwaahịa mmanụ ala" dị n'elu ahịrị mmiri dị na olulu mmiri ahụ.
Ihe ndị na-emerụ emerụ na mmiri bụ xylene, naphthalene, na mkpokọta mmanụ ala hydrocarbons nwere mmanụ mmanụ.
Xylene bụ mmiri ọkụ na-ere ọkụ nke nwere isi dị ụtọ nke a na-eji na ngwaahịa mmanụ ala, dị ka erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa. Ngosipụta na kemịkalụ nwekwara ike ịkpata isi ọwụwa, dizziness, mgbagwoju anya, na mfu nke nhazi ahụ. CDC kwuru na webụsaịtị ya.
Na Tuesday, Ngalaba Ahụike Hawaii kwuru na ndị ahịa niile nke sistemu mmiri ndị agha mmiri, nke na-eje ozi ihe dị ka mmadụ 93,000 na Joint Base Pearl Harbor-Hickam na ebe ndị ọzọ, kwesịrị izere ịṅụ mmanya ma ọ bụ jiri mmiri esi nri ma ọ bụ jiri ya maka ịdị ọcha ọnụ, ọ bụrụgodị na ha na-adị ọcha. anụghị isi ihe ọjọọ.
Ndị ọrụ agha na-azaghachi akụkọ 680 natara site n'aka ndị agha bi na mmiri mgbata na-esi ísì mmanụ. Na Wednesde ndị ọrụ ụgbọ mmiri malitere inye ndị bi na mpaghara ụfọdụ mmiri mmiri.
Ezinụlọ na-eji akụrụngwa ịsa ahụ n'akụkụ osimiri ọha na eze n'ihi na ha atụkwasịghị isi iyi mmiri na ụlọ mgbatị ahụ na ebe a na-enye ha.
Ndị agha mmiri ahụ achọpụtala ngwaahịa mmanụ ala na olulu mmiri Red Hill ya, bụ nke mechiri kemgbe Sọnde, ndị agha mmiri gwara otu akwụkwọ akụkọ mpaghara, nnwale maka mmetọ n'oge usoro nkesa mmiri Pearl Harbor-Hickam nke Navy na-abịaghachi na-adịghị mma.
Board of Water Supply Honolulu, onye ogwe Halawa na-enye ndị mmadụ 400,000 mmiri si Moanalua ruo Hawaii Kai, na-eche banyere mmetụta snowball.
Gọvanọ Hawaii David Ige nyere nkwupụta n'akwụkwọ akụkọ mpaghara, Star- Advertiser, na-akpọ ọkwa ahụ na-akpasu iwe nke ukwuu.
Hawaii Lt Gọvanọ Green kwuru na ọ na-eche maka ahụike na nchekwa nke ndị bi na mpaghara ahụ metụtara ma ghọta mkpa ha maka ozi oge na nke ziri ezi.
Lt. Gov. Josh Green wepụtakwara nkwupụta taa na-eme ka ndị agha mmiri rụọ ọrụ na mmekorita ya na ndị nnọchi anya ọgbakọ DOH na Hawaii iji dozie mmetọ ahụ.